चाडपर्वमा फेसनेवल र स्टाइलिस देखिन कस्तो पहिरन छनौट गर्ने ? | Kendrabindu Nepal Online News
चाडपर्वमा फेसनेवल र स्टाइलिस देखिन कस्तो पहिरन छनौट गर्ने ?
७ कार्तिक २०७५, बुधबार १२:१३
यतिबेला चाडपर्वको सिजन छ । आफुलाई राम्रो तथा सुन्दर देखिने सबैको चाहना हुन्छ । त्यो पनि चाडपर्वको बेला अरु समयभन्दा अलि भिन्न हुन मन लाग्छ । त्यसको लागि हामीले नयाँ नयाँ लुगा कपडा किन्नेदेखि लिएर अन्य कामहरु गर्छौ । तर नयाँ लुगाले मात्र राम्रो तथा सुन्दर देखिदैंन् । त्यसको लागि कपडाको छनाटेमा पचि भर पर्छ । चाडपर्वमा ट्रेण्डि र स्टाइलिस पहिरनको माग बढि हुन्छ ।
‘फेसनेवल देखिनको लागि आफ्नो शरिरको वनावट, वर्ण अनुसारको पहिरन लगाएमा सुन्दरतामा थप निखार आउने ।’ बताउँछिन् फेसन डिजाइनर राधा पोखरेल । उनी भन्छिन्, ‘त्यसैले फेसन सेन्स हुनु आवश्यक छ ।’ बजारमा ट्रेन्डमा आएको पहिरन लगाउनु वा खुल्ला कपडा लगाउनु मात्र फेसन होइन । अरु भन्दा भिन्न, स्टाइलिस र आफुलाई सहज हुने पहिरन लगाउनु नै फेसन हो । उनी थप्छिन्, ‘यसले हाम्रो कन्फिडेन्ट लेवल पनि बढाउँछ ।’
हामी चाडपर्वको अवसरमा कस्तो पहिरन फेसनमा छ ? कस्तो रङ र फेब्रिकको माग बढि छ ? भन्ने विषयमा काठमाडौंको गठ्ठाघरस्थित राधा कलेक्सनकी फेसन डिजाइनर राधा पोखरेलसँग केन्द्रविन्दुकर्मी सुजाता मुखियाले कुराकानी गरेकी छन्ः
१. अहिले कस्तो खालको पहिरनको माग बढि छ ?
सबै खालको नै ड्रेस बढि चलेको छ । तर, पनि गाउन, लेहेंगा, वानपिसहरु बढि चलेको छ ।
रङमा रेड, ब्ल्याक, रोयल ब्ल्यू, डार्क ब्ल्यू, मेहेन्दी मस्टर्ड, डार्क ग्रिन चलेको छ । बढि गइरहेको रङ भने मरुन, लाइट पिंक र मस्टर्डको माग बढि छ । फेब्रिकमा रसिल्क, साटन, जापनिज साटन, फ्लोरा, टिकि नेट जान्छ । एम्ब्रोइडरी टिकी नेटको गाउन, साडी, लेहेंगा जे पनि बन्छ ।
३. चाडपर्वको बेला गृहणीहरुले एकदमै बढि काम गर्नुपर्ने हुन्छ, यस्तो बेला उनीहरुलाई कस्तो खाले पहिरन उपयुक्त हुन्छ ?
सिम्पल वान पिस, गाउन उपयुक्त हुन्छ । लगाउँदा सजिलो र लुक्स पनि राम्रो देखिन्छ । अहिले बढि मात्रामा महिलाहरु गाउनमा नै आकर्षित भएका छन् । भने आमा छोरीले एउटै ड्रेस लगाउने फेसन चलेको छ । पहिलेको तुलनामा साडीको माग कम छ ।
बच्चाहरुको लागि पनि अहिले गाउनको नै माग बढि छ । सर्कल वानपिस, लेहेंगा, कुर्ती लगाउँदा पनि राम्रो देखिन्छ ।
ट्रेडिसनल लुक्स देखाउनको लागि ढाकालाई फोकस गरिराखेको हुन्छु । स्मार्ट पनि देखिन्छ । त्यसमा नयाँ लुक्स दिनको लागि लेहेंगा, लंग ड्रेस पुरै ढाकाको अथवा माथी चोली ढाकाको र मुनिको भाग रसिल्क, जर्जेटको राखेर बनाउँदा ट्रेडिसनल देखिन्छ ।
Prevयौन हिंसाको आरोप लागेका मन्त्री केशव स्थापितमाथि प्रदेश सरकारले छानबिन थाल्यो
दशै लगतै बढ्याे सुन चाँदीको भाउNext
हाई हिलको असर कति
फेसनमा आयो रातो रंगको ब्रा
सडकमा लिन्जरे क्याटवाक
नाङ्गो प्रति समर्पित फेसन सो